Fashilkii ugu horeeyay ee Rooble galo waa magacaabida Dhageey iyo Dhagdheer - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Fashilkii ugu horeeyay ee Rooble galo waa magacaabida Dhageey iyo Dhagdheer
Labada nin ee lagu magacaabo Senator Dhageey iyo Dhagdheer ayaa ah labo shaqsi oo aad looga yaqaano masraxaya siyaasadda Hawiye iyo guud ahaan dalka oo dhan, waa labo shaqsi oo lagu sheego in ay yihiin dalaaliinta siyaasadda.
Waa nooca loo yaqaano “siyaasiyiinta la kireysto” ama loogu yeero “igu shubo”. Iyada oo shacabka Muqdisho iyo guud ahaan beelaha Hawiye dareen aad u xun ka qabaan labadaad nin , ayaa hadana si indha la’aan ah ayaa RW Rooble ugu daray gudiga dhexdhexaadinta ee ciidanka gadooday iyo coodanka dowlada.
“Marka labaa nin aan ku arkay gudiga uu Rooble Magacaabay, aniga waan iska samray, labadaas nin waa rag aan xishoon oo waligood aan ka shqeeynin wanaag, balse ah dad xaalad abuurayaal ah si ay dantooda uga gaaraan” . Sidaa waxaa ayiri mid kamida saraakiisha hogaaminaysa ciidanka gadooday.
Dad badan ayaa rumeysan in RW Rooble uu ku dhacay fashilkii ugu horeeyay ee siyaasadeed, mar hadii uu labadaas uu rajo ka qabo in ay xaliyaan dhibaatada Muqdisho ka taagan.